Blog Blog ah oo Hindi ah - THE INDIAN FACE
Skateboarding waa edbinta sii kordheysa ee Spain, iyo koritaanka dhismaha jardiinooyinka loogu talagalay skaters sii kordhaya casriga ah ayaa kaliya sii kordhaya. Waxaan hoosta kuugu sheegeynaa kuwa ugu fiican Isboortiga Isbaanishka. Ha moogaanin iyaga!
En The Indian Face Waxaan aaminsanahay inaad ka faa'iideysan karto maalmaha nasashada, waana sababta boostadan ay kuu siineyso meelo badan oo aad u safri karto Easter 2021 oo aadan hubin weli, halkaasoo aad uga tagi karto guriga… miyaadan na aaminsaneyn? Soo ogow sida looga safro guriga mahadnaqa Google Earth.
Faa'iidooyinka yoga iyo meelaha ugu cajaa'ibka badan ee lagu dhaqmo!
Yoga waa ficil isku xira jirka iyo maskaxda si loo gaaro dheelitirnaan muhiim ah oo aad naftaada ku nabad geliso naftaada iyo kuwa kugu hareeraysan. Faa’iidooyinka yoga way cadahay waana la arki karaa. Waxaan kaaga sheegeynaa halka hoose waxaan kaloo kugula talineynaa meesha aad aadi karto haddii aad u baahato inaad u baxsato yogi dib u gurasho!
Safarka kaligaa wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ka goyso adduunka si aad ula xiriirto naftaada. Haddii aad ka fekereyso inaad naftaada la soo baxdo boorsadaada oo aad dhex gasho hal-abuurkaan keligaa ah, fiiri qorshooyinka isboorti iyo khibradaha aad sameyn kartid iyo talooyinka aad u baahan tahay inaad ogaato markii aad si ammaan ah ugu safreyso COVID-19
Spain iyo Andorra waxay leeyihiin daraasiin goobo baraf iyo aagag xor ah oo loogu talagalay dhadhanka oo dhan ... Shaki la'aan te kumanaan tacabiiro, boodbooyin, pirouettes iyo farac ayaa sugaya xarumihiisa kaladuwan. Miyaad horeba isku dayday inaad dhammaystirto farsamadaada oo aad isku daydo jaangooyada aan caadiga ahayn ee barafka? Halkan waxaan kuugu sheegeynaa shanta baraf ee ugu fiican jasiiradda si aad u ogaatid!
Ma jeceshahay socodka raadadka iyo ciyaaraha xiisaha leh? Masaafo dheer oo jidadka adduunka ah waxaa daboolaya orodyahanno raadraaca sannadba sannadka ka dambeeya-off-piste, markanna waxaan soo ururinnay kuwa ugu wada aqoonsan dhammaantood, laakiin sidoo kale qaar ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan, adag iyo kuwa eccentric. Akhriso oo soo hel tartamada ugu caansan uguna baahida badan adduunka!
Dalxiiska wareegga ayaa noqday mid ka mid ah howlaha ugu qabow xagaagan! Hawl firfircoon oo isku dhafan sida ugu fiican ee baaskiil wadista madadaalada iyo dalxiiska xiisaha leh. Ma waxaad tahay qof jecel weyn ee dalxiiska iyo baaskiil wadista? Kadib soo qaado muraayadahaaga baaskiil ee cusub oo nala raac qaar ka mid ah dariiqyada baaskiillada ugu fiican Spain, oo ay ka buuxaan magaalooyin astaan ​​u ah, iyo aragti buur iyo xeeb aan laga adkaan karin!
Fotonno laga soo qaado Faafida! Kuwani waa 10ka sawir ee mawjadaha ugu fiican ilaa maanta
Shaki la'aan, isaga oo leh sawir qaadida iyo isha farshaxanka, kuwan 10 sawir qaadayaasha Waxay ku guuleysteen inay ka kiciyaan shucuur iyo dareen aan la mid ahayn oo ku saabsan dadka jecel tacabirka, dabaasha, dabeecadda iyo badda. Midabada, qaababka, iyo qaababka la sameeyay ayaa qofkasta xitaa jacayl badan u qaadaya quruxda waaweyn ee qariya dhulkeenna. Halkan ka baro!
Dusha sare ee wanaagsan iyo xaaladaha cimilada adag ayaa Antarctica ka dhigay mid ka mid ah gobollada polarWaa mid aan loo dulqaadan karin Dunida, laakiin sidoo kale waa mid ka mid ah meelaha ugu xiisaha badan iyo barashada. Sababtaas awgeed, laga bilaabo The Indian Face waxaan rabnaa inaan kuu sheegno xaqiiqooyin xiiso leh!
1 2 3 ... 17 Xiga